Madaxda Dawladda Federaalka Soomaaliya oo cadaadis lagu saarayo inay ka qayb galaan shirka Garoowe. – Soomaali 24 Media Network
Wakiilada beesha caalamka ayaa cadaadis xooggan ku saaraya Madaxda Dawladda Federaalka Soomaaliya inay ka qayb galaan shirka uu dhawaan iclaamiyey Madaxweynaha Maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni.
Madaxweynaha Puntland ayaa dhawaan sheegay in 2 bisha May uu shir ka furmi doono magaalada Garoowe kaa oo iskugu umaan doonaan madaxda maamul goboleedyada isla markaana lagu marti qaaday Madaxweynaha iyo raysal wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya.
Safiirka Maraykanka ee Soomaaliya, Wakiilada Midowga yurub iyo Midowga Afrika ayaa la sheegayaa inay dadaal badan ku bixinayaan sidii Madaxda Dawladda FederaalkaSoomaaliya ay ugu qayb gali lahaayeen shirkaas.
Shirkan ayaa la aaminsan yahay in laga soo abaabulay magaalada Nairobi oo ay dhawaan ku kulmeen qaar ka mid ah Madaxda Maamul goboleedyada dalka, Siyaasiyiin mucaarad u badan iyo wakiilada beesha caalamka u qaabilsan Soomaaliya.
Lama oga go’aanka ay qaadan madaxda Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo sida ay u ajiibi doonaan dalabka kaga imaanaya wakiilada beesha caalamka.
ku dhawaaqista shirkan ayaa imaanaya xilli ay baaqdeen dhawr shir oo asaga ka horreeyey kuwaa oo ay iskugu imaan lahaayeen Madaxda Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Maamul goboleedyadu waxaana dad badani cabsi ka qabaan inuu u qabsoomi waayo sida loogu dhawaaqay.
Previous Shirweynaha Badqabka Fikirka iyo la dagaallanka Xagjirnimada oo maanta ka furmaya magaalada Muqdisho.
Next Ciidamada Jubaland oo la wareegay deegaan hoos yimaada degmada Afmadow ee Gobolka Jubada Hoose.